Waxkasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Duufarka Macdanta
/blog/Dianabol , Gallery/Waxkasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Duufarka Macdanta
Posted on 12 / 27 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray Dianabol, Gallery.
1. Waa maxay Dianabol (Methandrostenolone) budada?
2. Sida loo iibsado Dianabol (methandrostenolone) Powder Online
3. Sida loo sameeyo Dianabol guriga
4. Sida Dianabol (D-bol) u shaqeeyo
5. Dianabol (D-bol) Nolosha badhkeed
6. Dianabol Detection Time
7. Natiijooyinka Dianabol: Maxaan heli doonaa?
8. Dianabol (D-bol) Qiyaasta iyo Isticmaalka (Ma Ammaan baa in la qaato Dianabol?)
9. Dianabol (D-bol) Saamaynta Dhinacyada: Sida Loo Iska Ilaaliyo Saamaynta Dhinacyada
10. Sida looga fogaado oo loo maamulo Dianabol Side Effectives
11. Dianabol Review
Ma waxaad raadineysaa inaad xoojiso culeyskaaga muruqyada, inaad bilowdo iyaga ama aad sii wadato guulaha wax ku oolka ah? Budada Dianabol (methandrostenolone) waa inay noqotaa waxa kuugu weyn ee kugu xiga. Soo ogow waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato kuwan steroids anabolic, isticmaalka, wax ku oolnimada, iyo sida loo maro saameynta daawada.
Haddii aad tahay jirdhis jirka ah, waad fahmi doontaa inaad ka fiican tahay halganka helitaanka qulqulka murqaha. Isku qorida qolka jimicsiga iyo samaynta mashaariicda jilicsan ee jimicsiga sida safafka ama qaansooyinka waxaa laga yaabaa inaanay kugu filneyn inaad soo mareen muruqyadaada.
Ka shaqeynta waxay leedahay faa'iidooyin caafimaad, laakiin waxay u baahan tahay dulqaadka ugu sarreeya, joogteynta iyo waqtiga. Waxaan ula jeedaa, jimicsi ma sameyn kartid hal toddobaad, iska hubi muraayaddaada, oo waxaad rajeyneysaa inaad aragto murqaha caatada ah ee sixirka ah. Si kastaba ha noqotee, waxaad u dhaqmi kartaa si xikmad leh adoo ku kaabaya jimicsigaaga steroids dhiska la oggol yahay, taas oo shaki la'aan kordhin doonta murqahaaga toddobo maalmood gudahood.
Waa maxay Dianabol (Methandrostenolone) budada?
Sharaxaad ka mid ah budada Dianabol
Raw Dianabol waa bir kiimiko leh CAS no. (72-63-9), oo ka tirsan fasalka C17 stabdhabka anabolic. Waa steroid xooggan oo dabiiciga ah oo caan ka ah tan iyo 1950. Daroogadu badi waxay ka faa'iidaystaan ​​cayaaraha iyo jir-dhiseyaasha kuwaas oo raba in ay sii wadaan muruqyadooda oo ay kor u qaadaan xooggooda waqti gaaban.
Cudurka anabolic steroids ayaa loo yaqaan 'hepatoxic'. Si loo yareeyo saameyntaas, kuwa horumarinta Dianabol waxay ku dhufteen koox methyl ah oo ka tirsan 17th booska kaarboonka. Dammiinka labajibbaaran ayaa sidoo kale lagu daraa jaantuska koowaad iyo labaad ee aaladaha kaarboonka si loo yareeyo waxyeelooyinka astaamaha ah ee astroga ah sida finanka ama xayawaanka ragga.
Kordhinta ugu ballaaran ee loogu talagalay budada Megestrol acetate
Si ka duwan sida steroids kale, budada borotiinka Dianabol waa la ogol yahay inta badan wadamada. Si kastaba ha ahaatee, daawadu waa jadwal III walax la kantaroolo waxaana lagu heli karaa oo kaliya warqad dhakhtar qoray, gaar ahaan gudaha Maraykanka
( 1 2 3 ) ↗
Xogta aadka loo ixtiraamo ee laga helo machadyada caafimaadka qaranka
Xitaa ka dib dagaalkii labaad ee aduunka, Maraykanka iyo Midowga Soofiyeeti ayaa had iyo jeer ku tartamaya oo isha ku haya midba midka kale fikradaha. In kasta oo ay labadoodu ku lug lahaayeen dagaalka dhabta ah, waxay ku dhafan yihiin in ay isku garaacaan midba midka kale ee tartanka isboortiga iyo dayaxa.
Intii u dhaxeysay 1940-kii ilaa 50-meeyadii, Ruushku wuxuu xukumayay ciyaarihii Olombikada, taas oo ay ugu wacan tahay badeecada testosterone ee ay ciyaartoydoodu isticmaaleen. Si kastaba ha noqotee, sirtan ayaa ahayd mid muddo gaaban jirtay markii Mareykanku markaa jiray. Dhaqtarka Olombikada, John Ziegler, ayaa daahfuray xeeladdan. Isaga oo doonaya in uu dhaafo Midowgii Soofiyeeti, wuxuu la midoobay Ciba Farmashiyeyaasha in ay la yimaadaan wax soo saar la mid ah.
Dianabol (methandrostenolone) budada wuxuu soo ifbaxay dabayaaqadii 1950-meeyadii. Waxay ahayd wax caan ah inta udhaxeysa 1960s iyo '70s sida xulashada gaarka ah ee dhiska jirka ee steroids.
Si ka duwan kuwii horay u ahaa, daawadani waxay ahayd steroidska ugu horreeya ee afka laga qaato. Ujeedada daawadani waxay ahayd in ay si toos ah tallaabo u qaadaan tallaalka sharci darrada ah ee sterids by ciyaartoyda. Waxay leedahay saameyn yar oo astroloji ah waxaana laga heli karaa iyada oo la adeegsanayo daawooyinka dhakhtar soo qoray. D-Bol waa laba jeer ka xoog badan testosterone.
Dianabol Hormoonkaas Anadrol
Qiimeynta Anabolic 210 100 320
Qiimeeynta Androgenic 60 100 45
Astaamaha Kiimikada iyo Jirka ee Dianabol Powder
Magaca kiimikada 17a-methyl, 17b-hydroxy, 1,1-androstadienone, 3-mid
CAS maya. 72-63-9
Xaaladda dhibicda (° C) 163 - 167
miisaanka kelli 300.442 g / mol
formula kelli C20H28O2
milmi Biyaha (9.7 mg/L at 25°C)
· Glacial acetic acid
isticmaalka Wuxuu fududeeyaa kororka muruqyada
Magacyada iyo Macaamilka Dianabol
Reforvit-b · Dehydromethyltestosterone
Sida loo iibsado Dianabol (methandrostenolone) Powder Online
Iibsashada steroids dhiska waxay kuxirantahay dhowr arrimood. Goobtaadu waxay leedahay door muhiim ah maaddaama gobollada qaarkood ay dejiyeen xayiraadyo ku saabsan iibsashada, haysashada, iyo isticmaalka budada Dianabol. Tusaale ahaan, isticmaalka methandrostenolone iyo waxyaabaha ka dhasha waa sharci darro Maraykanka, Australia, iyo Kanada, ilaa aan warqad dhakhtar qorin mooyee. Si kastaba ha noqotee, waddamada kale sida Mexico, Iibso budada Dianabol waa sida ugu sahlan iibsashada labo ka mid ah sariiraha.
Sharci ahaan iibsashada Dianabol
D-bol waxaa laga yaabaa inay tahay daroogada xadidan ee gobolkaaga, laakiin waxaad weli ka iibsan kartaa sharci sharci ah shatiga Soo saaraha budada Dianabol. Aan sharaxo. Haddii aadan haysan warqad dhakhtar oo sharci ah, maskaxdaadu waxay u badan tahay inay riixdo suuqyada madow. Hagaag, heshiisku wuxuu noqon karaa mid aad u wanaagsan iyadoo la adeegsanayo albaabka dambe, laakiin waxaad u badan tahay inaad ku degto been abuur, daaweyn la'aan, iyo dawooyin halis ah.
In kasta oo aysan caqli gal ahayn in loo guuro gobol sharciyeeyay isticmaalka steroids, weli waad bangiga ka dhigan kartaa dukaamada tooska ah ee budada Dianabol. Ugu yaraan, waxaa laguu dammaanad qaadayaa wax soo saar tayo sare leh oo lagu soo saaray xaalado nadiif ah oo nidaamsan.
Ganacsiyo badan oo internetka ah ayaa bixiya stabdhabyada anabolic for sale. Tan iyo markii dukaammada Shiineeysku weligood daadadeen, waxaad ku ridi kartaa haraaga Dianabol budada Shiinaha, gaar ahaan iibsiyada waaweyn. Si aad u heshid iibiye la isku halayn karo, tixgeli ilaha ugu sarreeya, maraakiibta dabacsan, iyo helitaanka macluumaad ku haboon goobta khaaska ah.
Talaabooyinka budada Dianabol iibsiga khadka tooska ah:
U tag https://www.proanabolics.com/ ama wax kasta oo kale oo lagu kalsoon yahay ee Dianabol budada sida tan Dukaanka Shiinaha.
Guji barta baaritaanka, ku qor "Dianabol," oo raadi walaxda
Waxaa lagaa codsan doonaa inaad diiwaangeliso koonto si sahlan loola socdo sheyga inta lagu jiro rarka. Si kastaba ha noqotee, waad dooran kartaa inaad iska hubiso sidii martida.
Bixi faahfaahinta xisaabtaada
Xaqiiji amarka una sug dhererka gawaarida albaabka.
Ogsoonow in qiimaha budada Dianabol uu ku kala duwan yahay hal iibiye ilaa mid kale iyo tirada aad iibsaneyso.
Sida loo sameeyo Dianabol Guriga
Inta aad ka iibsan karto steroid diyaar ah, waxaad ka iibsan kartaa alaabta ceeriin gooni ah iyo la imow cunto kariska Dianabol ee gurigaaga. Nidaamkani wuxuu faa'iido u leeyahay in dhaqaale ahaan iyo is-beddeliddu ay kuu oggolaato inaad adigu u habeyso qiyaasta daawada jirkaada.
( 4 5 6 ) ↗
Waxaa jira illaa shan cunnooyinka cuntada loo beddelo budada Dianabol, kuwaas oo ku kala duwan hadba maaddooyinka isticmaalka iyo qiyaasta.
Saliidda canabka ah
Gawaarida dhalada ah ee dhalada ah
Sifiriye iyo siliinjiye sirinjiye ah
Aynu ku dallacno faahfaahinta sida loo sameeyo Dianabol guriga;
Budada D-bol 1g 20g ama 17.86ml 20g ama 17.86ml 5g ama 5.6ml 2.5g ama 2.23ml
Saliidda canabka ah 5.0ml 182.14ml 157.14ml 29.4ml Isticmaal saliidda gaduudan halkii (31.77ml)
Guud ahaan, budada Dbol waxay dhadhamineysaa qadhaadh, laakiin maaddooyinka kor ku xusan waxay ka takhalusi doonaan dhadhanka.
Sida Dianabol (D-bol) wuxuu u shaqeeyaa
Budada Dianabol waxay joojisaa muruqyada ka baxa jabinta iyadoo kor u qaadaysa soo saarista borotiinka iyo sii kordhinta nitrogen. Daawadani waxay jidhkaaga ka dhigi doontaa in aad xooga saarto dhammaan borotiinka la isticmaalo ee muruqyada. Waad ku mahadsantihiin nolosheeda nuska ah, waxaad billaabi doontaa isbeddelada isbeddelada diiwaan gelinta ee 7 - 10 maalmood.
Steroid wuxuu kiciyaa rabitaanka cuntada, xoogga, iyo niyadda qofka isticmaala.
Dianabol (D-Bol) Nolosha Nolosha
Dbol wuxuu leeyahay celcelis ahaan nus saac ee saacadaha 4. Adiga oo tixgelinaya in mudada aad u gaaban tahay, waxaad u baahan doontaa inaad si siman u kala qaybiso qiyaasta inta lagu jiro maalinta oo dhan si aad u ilaaliso heerka diirada dhiigga.
Waqtiga Qaadashada Dianabol
Steroid waxaa la ogaan doonaa ilaa lix todobaad laga bilaabo markii ugu dambeysay ee aad qaadatay. Haddii aad tahay ciyaartoy isboorti oo firfircoon, waa inaad joojisaa qaadashada Dianabol laba bilood ka hor imtixaanka.
Natiijooyinka Dianabol: Maxaan Heli Karaa?
Cudurrada anabolic ee ka shaqeynaya iyada oo lagu celinayo geeddi-socodka hab-raaca iyo sii kordhinta anabolismka. Dhinaca jidhka, waxaad u badan tahay inaad dareento xoogag hagaajin leh marka aad shaqeyneyso. Inkastoo Dianabol aysan ku siin karin muuqaal vascular, waxay ugu yaraan kordhin doontaa muruqyadaada waxayna kaa dhigi doontaa mid dhameystiran oo ka horeysa.
Kuwa taga jimicsiga, Dianabol steroid ayaa ah tan ugu fiican ee kor u qaadaysa awoodaada waxayna ku siineysaa adkeysi aad ugu adkeysato jimicsiga daran. Daroogadu waxay dedejisaa waqtiga soo kabashada isla mar ahaantaana waxay yareysaa daalka.
Methandrostenolone waa daawada ugu fiican ee loogu talagalay bukaanada qaba dhibaatooyinka helitaanka ama sii wadaan miisaan caafimaad leh. Badeecadu waxay kaa dhigi kartaa inaad ku darto ilaa £ 7million.
Heerarka Tijaabada ah ee Ballosterone
Haddii aad ku xanuunsato xaalad testosterone oo hooseysa, dhakhtarkaaga ayaa laga yaabaa inuu kuu qoro steroids sharci sida Dbol.
Kordhinta dayactirka nitrogen iyo dayactirka unugyada, gaar ahaan kaddib marka maqaarka, qaliinka, ama gubashada. Waxaa intaa dheer, Dianabol waxaa loo isticmaalaa daawaynta noocyo gaar ah oo dhiig-yarida.
Dianabol (D-Bol) Isugeynta iyo Isticmaalka (Ma Amaan ah in la qaato Dianabol?)
Qiyaasta 'Dbol qiyaasta' waxay u dhaxeysaa 15 iyo 50mg / maalin. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah dadka isticmaala khibrada leh waxay isticmaali doonaan sida ugu badan 100mg maalintii. Qodobka ugu muhiimsan ee ah in la ogaado waa in qiyaasta sare ee steroids ay u badan tahay inay saameyn ku yeelato cadaadiska dhiiggaaga.
Dumarka iyo gabadha cusub waa inaysan wax ka qaadin 15mg. Dumarka haweenka ah, qiyaasta ugu badan ee maalin walba waa 30mg. Qiime kasta oo ka sarreeya tani waxay keeni kartaa kororka sifooyinka galmada ragga iyo waxyeelooyinka kale ee aan lumin karin.
Dbol wuxuu leeyahay nolol yar oo gaaban, markaa, baahida loo qabo in lagu kala qaybiyo qiyaasta 2 - 3 jeer maalintii. Waxaa lagugula talinayaa in aad qaadato daroogada wakhtiyada raashinka si loo yareeyo waxyeelada caamka ah sida lalabbada. Mid ka mid ah habka ugu wanaagsan ee loo kordhin karo bioavailability Dianabol waa iyada oo lagu darayo raashin ku jirta cuntadaada.
( 7 8 9 ) ↗
Dbol wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee steroid dhiska ah oo afka laga qaato. In kasta oo daroogada si caan ah loo heli karo loona qaato kiniin ahaan, waad ku maamuli kartaa iyada oo loo marayo duritaanka muruqyada. Natiijooyin aad u wanaagsan, waa inaad isku duubtaa xirmooyinka 'Dianabol' adoo isticmaalaya steroids kale sida Durabolin, testosterone, Primobolan, ama trenbolone.
Miisaanka caadiga ah ee Dianabol wuxuu soconayaa inta u dhaxaysa afar illaa iyo lix toddobaad iyada oo la qaato qiyaasta xNUMX - 30mg. Muddada gudaheeda, iska hubi in aad sterooto ku dhejiso qadar maalinle ah oo kaarar ah iyo N50guard si looga hortago dhaawaca beerka. Aromasin waa in ay sidoo kale u timaadaa si loo joojiyo aromatization, taas oo ka masuul ah sameynta oolojiin iyo haynta biyaha.
Natiijooyinka Dianabol badanaa waa la ogaan karaa usbuuca ugu horreeya ee qaadashada. Halkan waxaa ku yaal qiyaas ku saabsan inta miisaan ee aad ka heli karto meertada buuxda;
Muddad (toddobaadyo) Mass (miisaan)
Dhamaadka lixda toddobaad, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo daaweynta dambe ee daaweynta si looga fogaado xakamaynta hormoonnada qanjirka pituitary. Xaaladaha badankood, wareegga ayaa hoos u dhigi doona heerarka testosterone. Sidaa darteed, waxaa lagaa xilsaaray inaad hubiso in heerka uu ku soo laabanayo caadi ahaan haddii aadan luminin muruqyada aad isku urursatay. Daaweyntu waxay socotaa ilaa afar toddobaad.
Dianabol (D-bol) Cilladaha Dhibta ah: Sida looga fogaado Saameynada Dhaawaca
Dianabol steroid waxay faa'iido leedahay oo keliya haddii aad si caqli ah u isticmaasho inta aad tixgelinayso taxaddarrada iyo halista ku lug leh. Inta badan ee aad kordhisid qiyaasta, waxay u badan tahay suurtagalnimada inaad la kulanto waxyeelo daran.
Biyaha lagu hayo ama ku lumo
Kordhinta qanjirka 'prostate'
Xakamaynta qanjirka 'pituitary'
Koritaanka timo aan caadi ahayn
Baxsiga ama sifooyinka galmada ee dheddig sida dumarka dhawaaqa qoto dheer, korriin aan caadi ahayn, ama ballaarinta kintirka.
Kordhinta baruurta xun ee LDL iyo hoos udhaca kolestaroolka HDL ee wanaagsan
Sidee looga hortagaa oo u maamulaan saameynta daaweynta Dianabol
Isticmaal xakameynta aromatase ama anti-estrogen
Dbol wuxuu u nugul yahay aromatizing galay estrogen. Marka jirku uu aad u badan yahay ee jirka ku jira, natiijooyinka ayaa ah biyaha lagu hayo, is-ilaalin, dhalmo-la'aan, ginecomastia, ama niyad-jabka.
Warka fiicani waa in aad isticmaali kartid xayawaanka aromatase si loo xakameeyo isbedelka qotomiska ee estrogen. Tusaalooyinka qaarkood waxaa ka mid ah letrozole, Aromasin, iyo Arimidex. U hubso inaad qaadato waxyaabahan inta lagu jiro wareegga Dianabol iyo daaweynta wareega dambe.
( 10 11 12 ) ↗
Tijaabooyinka beerka ee caafimaadka
Cabbirka ugu fiican waa in uu yareeyo sumowga beerka isagoo yareynaya dhaawaca oksida. Haddii ay ku jirto yamaaruggii caanaha, NAC, TUDCA, oo ka mid ah maaddooyinka kale ee hodanka ah, taasi waxay ka dhigan tahay inay ku habboon tahay biilka.
Waxaad u baahan tahay inaad qaadato Dianabol oo ay weheliyaan macdanta kor u qaada heerarka kolestaroolka. Qaar ka mid ah waxyaalahan soo socda ayaa waxaa ka mid ah bariiska caanaha cas, saliidda kalluunka, niacin, ama co-enzyme Q10.
Caadi ahaan, qadarka testosterone ee uu soo saaro jirka ma noqon doono mid ku filan xilliga wareegga Dbolka. Haddii heerkulku hoos u dhaco, habka dhismaha muruqyada ayaa sidoo kale xakameyn doona. Sidaa daraadeed, adoo isdabajaya qaar ka mid ah qalabka tijaabada ee Dianabol ayaa kaa caawin doona inaad gaarto hadafkaaga.
Qaado cuntooyin hodan ku ah omega dufanka omega iyo borotiinka caafimaad qaba. Cuntooyinka dufanka badani waa sababta asaasiga ah ee biyaha lagu hayo, markaa, kororka heerarka cadaadiska dhiigga.
Qaado qiyaaso yaryar oo la kontoroolo
Kuwa bilowga ah waa inaysan ka badin qiyaasta 20mg / maalin. Inkasta oo qaar ka mid ah jirka jidhka ku jiraa ay halis ugu jiraan inay qaataan 100mg ee steroid, dhaqanku ammaan maaha. Haddii ay tahay inaad kordhiso tirada, 50mg waa sax. Qiyaasta qiyaasta sare waxay u dhigantaa waxyeelo soo noqnoqota sida sarreeya cadaadiska dhiigga.
Ogsoonow in wareegga Dianabol uu socon doono inta u dhexeysa lix iyo siddeed toddobaad.
Caruurta, dhalinyarta, ama qof kasta oo ka yar sanadka 30
Carruurta, qaadashada Dianabol waxay faragelisaa korriinka lafaha iyo horumarinta galmada.
Cudurka steroids wuxuu keeni karaa isbedelka uur-jiifka
Bukaannada kansarka naasaha iyo qanjirka 'prostate'
Dib u eegida Dianabol
Horumarka Massive Mass
Waxaad bilaabi doontaa inaad ogaato saameynta isla markiiba aad bilowdo qiyaasta. Xitaa uma baahnid inaad isbarbar dhigto Dianabol kahor iyo kadib sawirrada si aad u ogaatid faraqa. Toddobaadka ugu horreeya ka dib, jidhkaaga ayaa u muuqan doona mid dhammaystiran, waxaadna la kulmi doontaa miisaan culus.
Intaad jimicsiga ku samaynayso jimicsiga, waxaad yeelan doontaa awood kugu filan oo aad ku sameyso jimicsi xoog leh ama aad kor ugu qaaddo culeysyo culus. Dhamaadka wareegga, waxaad kuheli doontaa wax kudhow 20lbs.
Kala saaraan soo saarida hormoonada koritaanka dadka
Daroogada ayaa ka mid ah kuwa yar steroids sharci kaas oo kor u qaada hormoonka koritaanka. Haddii aad isku darto xidhmooyinka Dianabol oo leh cunto caafimaad leh iyo jimicsi joogto ah, steroidku wuxuu u shaqeeyaa sixir. In kasta oo aad hesho xoogaa macquul ah, dufanka jidhkaagu si weyn ayuu u yaraadaa.
Inta badan steroids iibka waa la isku duro. Si kastaba ha noqotee, Dianabol waxaa afka laga qaadaa iyada oo loo marayo kaniiniyada, kaniiniyada, kaabsoosha, ama qaab dareere ah. Waxa kale oo aad samayn kartaa cuntadaada budada ah ee Dianabol oo aad u habeyn kartaa qiyaasta.
Dhibaatooyinka ugu daran ee dbol waa dhiig kar, waxyeelo beerka, iyo ginecomastia. Xaqiiqda ah in xabadkaagu si qarsoodi ah u buuxsamo wax ka yar toddobaad wuxuu noqon karaa iska caabin. Waad xakameyn kartaa inta ka hartay dhibaatooyinka soo raaca adoo ilaalinaya anshax shaqsiyeed iyo raac tilmaamaha, laakiin ginecomastia lama xakamayn karo.
Waxyeellooyinka kale ee kale ee jirka ka dhigaya in jirka laga dhigo daroogada ayaa ah fursadaha dhalmada, dhibaatooyinka wadnaha, iyo waxyeelada beerka.
Markaad maqashid daawooyinka stabdhabka anabolic, su'aalo dhowr ah ayaa hubaal ka dhigaya inaad maskaxdaada ku dhex jirto. "Dialabol sharci ma yahay?","Ma heli karaa qiyaas daawo aan rukhsad laheyn?","Goorma ayay ahaayeen steroids abuuray?"Iyo su'aalaha la midka ah. Maqaalka kore wuxuu leeyahay dhammaan jawaabaha aad isku dayaysay inaad hesho.
Dbol for sale wuxuu ahaa mid baahsan oo u dhexeeyay 1960 iyo 1970 steroids ereyga jirka. Si kastaba ha ahaatee, waxyeellooyinkeeda ayaa FDA u soocisay iyada oo ah maaddo III ah oo xaddidaysa isticmaalka. Dalka Mareykanka, Dianabol waxaa la heli karaa oo keliya adigoo soo qoray warqad dhakhtar.
AASraw waa soo saaraha xirfadlaha ah ee Dianabol (Methandrostenolone) budada kaas oo leh shaybaar madaxbannaan iyo warshad weyn oo taageero ah, dhammaan wax soo saarka waxaa lagu fulin doonaa nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo. Nidaamka sahaydu waa mid deggan, labadaba tafaariiqda iyo dalabaadka jumlada waa la aqbali karaa. Ku soo dhawow si aad u ogaato macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan AASraw!
Naga tag annaga Farriin
6 jecel yahay
10 waxyaalood oo ay tahay inaad ogaato kahor intaadan qaadanin DMAA
Maydka ugu xooggan ee Mibolerone (Hubso dhibcaha) internetka
10 waxyaalood oo ay tahay inaad ogaato kahor intaadan qaadanin DMAA Dib u eegida Oxymetholone: ​​Ultimate Guide ee Oxymetholone (Anadrol)